जे पनि युट्युब - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
जे पनि युट्युब
हातमा स्मार्टफोन, नेटवर्कमा वाईफाई र जिमेलमा एकाउन्ट छ भने तपाईं सजिलै युट्युबर बन्नुभयो । यसमा अब तपाईंलाई के कुरा अपलोड गर्न मन लाग्छ त्यो कुराको निर्णय भने तपाइंकै हातमा हुन्छ । अहिले युट्युबको लहर नै चलेको छ । अझ युट्युबले धेरै हेरिने भिडियोलाई राम्रै रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि अहिले युट्युब कतिपयका लागि रोजगारीसमेत भएको छ । सोसल मिडियाको यो भिडियो प्लेटफर्ममा सबैले भिडियो अपलोड गरेर पैसा मात्र कमाएका छैनन्, कसैले आफ्नो ग्ल्यामर बेचिरहेका छन् भने कसैले आफ्ना सिर्जना । अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चा र पैसा कमाउने सबैभन्दा छरितो माध्यम बनेको युट्युबबाटै धेरै जना पीडित समेत भएका छन् भने युट्युबलाई नै प्लेटफर्म बनाएर आफ्नो करिअरलाई धेरैले धेरै माथि पनि पुर्‍याएका छन् । युट्युबको यही प्लेटफर्मलाई नेपालका धेरै व्यक्तिले विभिन्न ढंगले उपयोग गरिरहेका छन् । युट्युबको यो संसारमा नेपालीहरूले के–कस्तो कार्य गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा विशेष रिपोर्ट :
युट्युबमा उपलब्ध केही नेपाली च्यानलले तयार पारेका भिडियो सामग्रीका शीर्षक पढ्नसम्म नसकिने खालका हुन्छन् । युट्युबमा सब्सक्राइबर तथा भ्युअर्स बढाउने होडबाजी चलिरहेका बेला अश्लील शीर्षक राखेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने एउटा च्यानलमा एउटी महिला कार्यक्रम प्रस्तोताले सार्वजनिक स्थलमै अपरिचित व्यक्तिहरूलाई सुन्दै लाज लाग्ने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छिन् । भिडियो क्यामेरा तथा माइक लिएर सडकमै उत्रिने ती उद्घोषिका हुन्— सोनिका रोकाया । सोनिकाले आफूलाई निडर युवती बताए पनि उनले अश्लील प्रकृतिका जिज्ञासा राखेर युवापुस्तालाई आफ्नो च्यानलप्रति आकर्षित गरिरहेको अनुमान जो–कोहीले गर्न सक्छन् ।
युट्युबमा अश्लीलता बढिरहेको आरोप आइरहे पनि उनी भने आफूलाई बिन्दास युवतीका रूपमा चित्रण गर्न पछि पर्दैनन् । एउटा युट्युब अन्तर्वार्तामा सोनिकाले भनेकी छिन्, ‘हो, मेरा क्रियाकलाप समाजलाई नपच्ला तर स्वीकार चाहिँ गरेको छ । विषय अश्लील लाग्ला तर सन्देश सकारात्मक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सोनिकाका अनुसार यौन सबैलाई आवश्यक छ, यद्यपि यसलाई लुकाएर राखिएको छ । समाजमा यौनका कुरा लुकाइने भएकाले आफूले त्यसलाई उजागर गर्न खोजेको सोनिकाको तर्क छ । सोनिकाका अनुसार उनलाई युट्युबमा देख्ने धेरैले गाली गरे पनि लुकी–लुकी माया गर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
सोनिका रोकाया तथा उनको युट्युब च्यानल त एउटा उदाहरण मात्र हो । युट्युबमा यतिबेला अश्लीलता पस्किएर आफ्ना सामग्रीमा भ्युअर्स बटुल्ने तथा धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब बनाउनेहरूको सूची लामै छ । गायिका सरस्वती लामादेखि तिर्सना बुढाथोकीसम्मले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दै आफ्ना उत्तेजक सामग्रीमार्फत दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।
यति मात्र होइन, युट्युबमा केही त्यस्ता नेपाली च्यानलहरूसमेत छन्, जसले छोटा चलचित्रको नाममा अश्लीलता पस्किरहेका छन् । कुलन टिभी, एनएचएस, मिलन फिल्म्स, इन्जोय नेपाल, ग्लोबल मेन च्यानल, गोल्ड टिभीमा त्यस्ता दर्जनौं सर्ट फिल्म उपलब्ध छन्, जसका शीर्षक नै दर्शकको ध्यान आकर्षित गर्न पर्याप्त छन् । बलात्कार, फाटेको खुट्टा, ५ सयको माल, मालिक्नी भर्सेस नोकर, छिप्पेको बोका, भाले चोर्ने पोथी, नसो पस्यो माया बस्यो, गेस्ट हाउस, बुढेसकालमा भियाग्रा खाएर कमाल, उल्टो पाराले आदि शीर्षकका सर्ट फिल्म कुलिन टिभीमा उपलब्ध छन् ।
त्यसबाहेक यो च्यानलले परिकार बनाउने विधि भन्दै विभिन्न खानेकुरा बनाएका भिडियो पनि समावेश गरेको छ, जसमा खाना बनाउने विधिभन्दा पनि युवतीका अंग देखाउन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्जोय नेपाल च्यानलले ६ महिनाअघिसम्म उत्तेजक शीर्षक राखेर सर्ट फिल्महरू अपलोड गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय यो च्यानलमा जानकारीमूलक सामग्री अपलोड गरिए पनि विगतमा भने लाहुरेकी श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड, होम ट्युसन, कन्डम, रुम नम्बर ३६ जस्ता शीर्षकमा सामग्री अपलोड भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार–माध्यममा अश्लील भिडियो एवं छोटा चलचित्रको चर्को विरोध भएपछि पछिल्ला ६ महिनायता यी सबै च्यानलले अश्लीलता छाडेर जानकारीमूलक सामग्रीहरू अपलोड गर्न थालेको पाइन्छ । विगतमा अश्लील लाग्ने ती सर्ट फिल्ममा काम गर्ने कलाकारहरूले आफूहरूलाई फसाइएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
झन्डै ८ सय वटा सर्ट फिल्म बनाइसकेका एक निर्देशकले अहिले आफूलाई म्युजिक भिडियोमा मात्र सीमित राखेको बताएका छन् । उनको दाबीअनुसार विगतमा अश्लील तथा उत्तेजक सर्ट फिल्म तथा भिडियो सामग्रीहरूको निर्माणमा सक्रिय अधिकांश चलचित्रकर्मी अहिले उक्त कार्यबाट पछि हटेको छ ।
उत्तेजक तथा अश्लीलता झल्कने शीर्षक राखेर अपलोड गरिएका भिडियोले धेरैभन्दा धेरै भ्युज पाउने तथा त्यसका आधारमा सम्बन्धित च्यानललाई युट्युबले विज्ञापन दिने अनि त्यसबाट राम्रो अर्थ संकलन हुने भएकाले पनि निर्माता–निर्देशकहरू त्यस्ता सामग्रीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । ५ देखि १५ मिनेटसम्मका त्यस्ता सर्ट फिल्म बनाउन ठूलो बजेट पनि नचाहिने तथा कलाकारहरू समेत सहजै उपलब्ध हुने भएकाले झन्डै एक दर्जन निर्देशक अश्लील खालका सर्ट मुभी निर्माणमा पल्किएका थिए । चलचित्र विकास बोर्डले विगतदेखि नै छोटा चलचित्रलाई समेत सेन्सरको दायरमा ल्याइने कुरा बताउँदै आए पनि हालसम्म त्यसतर्फ ठोक कदम भने चालिएको छैन ।
अशोक दर्जी प्रकरण
युट्युबमा अशोक दर्जी टाइप गर्दा २६ हजार ९ सय रिजल्ट देखिन्छ । झापाका सडक तथा होटलहरूमा गीत गाएर गुजारा चलाइरहेका अशोकलाई केही युट्युबरले चर्चामा ल्याए । सुरुमा नवराज उप्रेती, नयाँ–नयाँ न्युज नेपाल र तात्तातो खबरले भिडियो बनाएपछि उनी चर्चामा आए । त्यसपछि डिजे रूपकले झापाबाटै अशोक दर्जीको गीत फेसबुक लाइभ गरे । बिस्तारै उनी चिनिँदै गए । मोरङका पत्रकार किशोर श्रेष्ठको अगुवाइमा अशोक दर्जीका लागि कार्यक्रममार्फत केही रकम संकलन गरियो । झापामै उनको गीत रेकर्ड भयो भने दर्जीलाई उर्लाबारीस्थित बेथेल एजुकेसन एकेडिमीमा भर्ना समेत गरियो ।
युट्युब छाडा भयो भन्ने गुनासो धेरैको छ । अश्लिल भिडियो, दृश्य तथा विवादास्पद ईश्यु प्रकाशन गरी सकेसम्म भ्युज बढाउने र त्यसबाट डलर झार्ने ध्याउन्नमा छन् कतिपय युट्युबर समाजले पचाउन समेत नसक्ने सामग्री भयो भन्दै प्रहरीमा उजुरी समेत परेका छन्, तर त्यस्ता सामग्री अपलोड हुने क्रम रोकिएको छैन । केही त्यस्ता उदाहरण पनि छन्, जसले दर्शकको रुचि एवं चाहनाअनुरूपका भिडियो सामग्री प्रकाशन गर्ने गरेका छन् ।
गुल्मीका रविलाल पौडेल आफ्नो च्यानलमा अधिकांशत: विवाहसम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्छन् । उनको युट्युब च्यानलमा गाउँघरका पुराना लोकबाजासहित उनले खिच्ने भिडियो हेर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू गाउँघरको नृत्य तथा दृश्य हेर्न पाउँदा अनि आफूलाई मन पर्ने मौलिक पञ्चैबाजा सुन्न पाउँदा त्यसै मख्ख पर्छन् । १ लाख ५६ हजारले ससक्राइब गरेको उनको च्यानलमा ७ सय १६ वटा भिडियो छन् । केही दिन भिडियो आएन भने किन आएन भनेर प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन्, रविलाल भन्छन्– विदेशमा बस्नेहरू गाउँका भिडियो हेर्न पाउँदा दंग पर्छन् र संस्कृति संरक्षणमा लागेको भन्दै धेरै माया गर्छन् । गाउँमा लुकेका घटनालाई पनि उनले रिपोर्ट बनाएर आफ्नो च्यानलमा राख्ने गरेका छन् । पौडेल भन्छन्– महिनाको ६०–७० हजार नियमित कमाई भैरहेको छ, यसबाट मैले अनाथ, अपांग तथा दु:ख पाएकाहरूलाई सहयोग समेत गरिरहेको छु ।
युट्युबमा अर्का एक व्यक्ति हिट छन्, डा. ताराजी । १ लाख २ हजारले ससक्राइव गरेको उनको च्यानलमा १ सय ६७ वटा भिडियो छन् । डा. ताराजीका अधिकांश भिडियो ज्ञानगुनसम्बन्धी हुन्छन् । उनको च्यानलमा आफूलाई घात गर्ने व्यक्तिप्रति कसरी व्यवहार गर्ने, पढ्न अल्छी लागे कसरी उत्साह जगाउने, समस्यै समस्याबाट मुक्त हुन् के गर्ने, आफ्नो दिमाग र ज्ञानको सदुपयोग कसरी गर्ने आदि उपाय सिकाउने भिडियोहरू छन् । मेडिकल डाक्टर तथा मोटिभेसन ट्ेरनर डा. ताराजी समय व्यवस्थापन गरेर आफूले ती भिडियो तयार पार्ने कुरा बताउँछन् ।
युम्मी नेपाली किचन च्यानल हो, जहाँ नेपाली परिकारसम्बन्धी सामग्री उपलब्ध हुन्छ । यो च्यानलमा फिनी, सेल रोटी, मटन छोयला, चटामरी, नमकिन, चना तथा आलुको तरकारी, योमरी, खसीको मम, प्याजको पकौडा आदि विभिन्न परिकार कसरी बनाउने भन्ने उपाय सहित के–कस्ता सामग्री जुटाउने भन्ने कुरासम्म समेटेर बनाइएका भिडियो अपलोड गरिएका हुन्छन् ।
एभिया क्लब नेपालले आफ्नो च्यानलमा प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट आदिबाट पोखराको आकाशमा खिचिएका भिडियो प्रकाशन गर्ने गरेको छ । उक्त च्यानलमा हेर्न पाइन्छ । यो च्यानलमा पोखरा र आसपासका रमणीय दृश्य बाहेक अन्य कुनै भिडियो देखिँदैन ।
प्राङ्क भिडियो बनाएर चर्चा कमाएको नेपाली प्राङ्क स्टार मनोरन्जन क्षेत्रमा चलेको च्यानल हो । यो च्यानलमा २ लाख ४९ हजार ८ सय बढीभन्दा ससक्राइवर छन् भने १ सय ६० वटा भिडियो अपलोड गरिएको छ । यस्तै प्राङ्कस्टार रिभाइवल, नेपाली प्राङ्क मिनिस्टर आदि केही च्यानल छन्, जसमा निकै रमाइलो ढगंबाट मानिसहरूलाई उल्लु बनाइएका भिडियो हेर्न पाइन्छ । केही व्यवस्थित र आकर्षक ढगंबाट यी च्यानलमा प्राङ्कसम्बन्धी भिडियो राखिएको पाइन्छ । १३ करोडपटकभन्दा बढी हेरिसकिएको नेपाली प्राङ्क मिनिस्टरमा झन्डै १ सयवटा भिडियो उपलव्ध छन् ।
कलेज नेपाल च्यानलमा युवापुस्तासम्बन्धी विभिन्न भिडियो अपलोड हुँदै आएको छ । यो च्यानलमा बेरोजगार युवा, युवापुस्ताका समस्या, टिनएजर्सका फेसनेवल कुरा तथा उनीहरूका चुनौतीमा आधारित भिडियो उपलब्ध छ ।
नेपालमा खास विषयवस्तुमा केन्द्रित च्यानल निकै कम छन् । म्युजिक नेपाल, बुढासुब्बा, हाइलाइट्स नेपाल, विन्धवासिनी आदि च्यानल सांगीतिक च्यानल हुन् । यी च्यानलमा विशेष गरी विवादमा नआउने खालका गीत, संगीत तथा चलचित्र अपलोड गरिएका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने र हेरिने च्यानल पनि यिनै हुन् ।